Wararka - Dooro koronto -dhaliyaha oksijiin sida waafaqsan shaqada sheyga
Dooro koronto -dhaliyaha oksijiin sida waafaqsan shaqada sheyga
Marka hore, iyada oo la-socodka fiirsashada oksijiinta: Waqtigan xaadirka ah, mashiinnada dhexda-ilaa-dhammaadka ah ee suuqa guud ahaan waxay adeegsadaan shaashadaha LCD-ka cad ee BD, waxayna leeyihiin aalad u gaar ah oo lagula socdo ogsajiinta si loo ogaado, taas oo hubin karta fiirsashada oksijiinta ee mashiinka waqti. Haddii aad haysato lacag aad ku iibsato hawshan, macno malahan haddii aadan haysan. Soo -saarayaasha joogtada ah ayaa wici doona booliiska haddii u -fiirsashada oksijiinta ay ka hooseyso 82% sida waafaqsan shuruudaha qaranka. Waxaa lagu talinayaa in la iibsado oximeter halkii. Faa'iidada oksimeter -ka ayaa ah in la ogaado xaddiga oksijiinta dhiigga ee jirkaaga. Haddii aad neefsanayso oksijiin, laakiin weli jirkaagu uusan raaxo lahayn, oo aad ogaato in qiimuhu aad u hooseeyo baaritaanka oximeter -ka, waxaad isla markiiba qaadan kartaa daaweyn firfircoon. Marka loo eego waayo -aragnimadayda, ogaanshaha fiirsashada oksijiinta ee ay bixiso ka -uruuriyaha oksijiintu guud ahaan aad buu u sarreeyaa. Waxaan guud ahaan isticmaalaa aalad tijaabinta dhinac saddexaad si aan u go'aamiyo uruurinta uruuriyaha oksijiinta. Midda labaad, shaqaynta atomization -ka: laguma talinayo in la iibsado atomizer leh shaqaynta atomization -ka. Haddii aad u baahato, waxaad si gooni ah u iibsan kartaa atomizer. 90% dadku ma isticmaalaan hawsha atomization -ka.
Marka labaad, shaqada udub -dhexaadka dhaliyaha oksijiinta waa soo -saaraha oksijiinta oo leh shaqaynta atomization. Waxtarka atomization -ka iyo cabbirka walxaha ma aha mid u sarreeya sida hufnaanta atomizer gaar ah, iyo nuugista bukaanku ma aha mid sidaas u buuxsan. Sababta ay isbitaalladu ugu baahan yihiin inay wada isticmaalaan waa sababta oo ah is -dhexgalka warshadaha ayaa ku habboon kalkaaliyayaasha iyo dhakhaatiirta si loo daweeyo bukaannada. Haddii aad u isticmaashid atomizer si aad u samaysato bukaanka kaligiis. Dhinac kasta oo sariirta waa inay lahaataa atomizer, kaas oo kordhin doona culeyska shaqada, kaydinta, iyo kharashka isbitaalka. Isbitaalku wuxuu ka yimid dhinaca maareynta habboon iyo keydinta kharashka, bukaankuna waa inuu cudurka ku daweeyaa saameynta ugu fiican. Intaa waxaa dheer, koronto -dhaliyaha oksijiinta ee isla astaantaas oo aan lahayn atomization waa mid la awoodi karo. Suufku wuxuu saaran yahay idaha. Haddii aad ku darto hawl haynta, waxay u kordhin doontaa qiimaha soo -saaraha, kharashkuna weli waa adiga. Intaa waxaa dheer, mashiinnada leh shaqaynta atomization waxay leeyihiin heer iibin ka sarreeya. Soo -saareyaasha oksijiinta oo leh shaqaynta atomization waxay u baahan yihiin in lagu xiro dalool gooni ah. Haddii is -dhexgalku khaldan yahay, uruurinta iyo cadaadiska koronto -dhaliyaha ayaa ku filnaan doonin. Ugu dambayntii, uruuriyeyaasha oksijiinta ee la soo waariday ma laha wax habayn ah. Waa maxay sababta uruuriyeyaasha oksijiinta ee la soo waarido aysan lahayn wax habayn ah? Tiknoolajiyadoodu miyuusan u horumarin sida kuwayada oo kale? Maya, sababta oo ah cilmi baaris kadib, waxay dareemayaan in hawsha atomization -ka ee koronto -dhaliyaha oksijiin uusan u baahnayn in lagu daro koronto -dhaliyaha.
Saddexaad, tijaabinta dheecaanka oksijiinta dhiigga: oo ku habboon bukaannada leh xaalado aad u daran, iyo kormeer joogto ah, bukaannada aan aadka u xanuunsaneyn ma isticmaali karaan hawshan, gadashada oximeter-ka gaarka ah ayaa ku habboon in la qaado, la kaydiyo, oo la tijaabiyo.
Haddii aad qabtid wax su'aalo ah oo ku saabsan uruuriyaha oksijiinta, waad nala soo xiriiri kartaa waqti kasta. Hangzhou Gravitation Equipment Medical Co., Ltd. waa xirfadle alaab -ururiye ogsijiin leh